Olee otú iji tọghata AVI ka iPhone 4S on Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
> Resource> iPhone> Olee otú iji tọghata AVI ka iPhone 5S / 5 / 4S na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
"M nwere ụfọdụ DivX-fim (.avi) na kọmputa m na m chọrọ iji tọghata ha, otú m nwere ike na-ele ha na m iPhone 4. m gbalịrị breeki aka ma ọ dịghị arụ ọrụ. Kwa, enweghị m ike ịchọ ihe ọ bụla bara uru na Google. Gịnị omume kwesịrị m na-eji? "
Na-egwu AVI (DivX fim) on iPhone 5S / 4S / 5, iPhone 4 na ndị ọzọ na ụdị nke iPhone, mbụ ị mkpa iji tọghata AVI ma ọ bụ DivX ka iPhone dakọtara formats dị ka MP4, MOV ma ọ bụ M4V. Isiokwu a na-ewebata abụọ ngwọta maka converting AVI usoro iPhone format na Mac na Windows (Windows 10 gụnyere) maka enyere gị aka ịna-playback. Ebe a anyị na-aga nzọụkwụ site nzọụkwụ nduzi:
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata AVI video ka iPhone na Mac
Nkebi nke 2: Olee otú iji tọghata AVI video ka iPhone na Windows
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata AVI / DivX video ka iPhone 5S / 5 / 4S na Mac
Iji mee ihe dị otú ahụ AVI faịlụ ka iPhone faịlụ Mac akakabarede, i kwesịrị a ọkachamara video Ntụgharị maka Mac inyere gị aka. Onye na-eji ebe a na-enye unu na àjà ihe ọṅụṅụ-ngwa-ngwa akakabarede ọsọ nakwa dị ka ọnwụ-na-erughị video àgwà:
Kpọmkwem ịdọrọ & dobe gị AVI faịlụ ka Mac ngwa, ma ọ bụ isi "File" menu mgbe ahụ họrọ "Ibu Ibu Media Files" mbubata gị faịlụ maka converting. Ogbe akakabarede na-ekwe;
Họrọ gị mmepụta usoro. N'ihi na iPhone, a Ntụgharị ewepụtawo kachasị preset maka ngwaọrụ otú i nwere ike ozugbo họrọ ya: emeghe format ndepụta> Gaa na "Ngwaọrụ"> Họrọ iPhone. The preset dị maka iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS na iPhone 4;
Pịa "tọghata" iji tọghata AVI ka iPhone na Mac-agba ọsọ Mac OS X Snow agụ owuru, Mac OS X odum wdg ..
Nkebi nke 2: Olee otú iji tọghata AVI / DivX faịlụ ka iPhone na Windows (Windows 10 gụnyere)
Ị chọrọ onye AVI ka iPhone Video Ntụgharị, nke nwere ike inyere iji tọghata AVI usoro iPhone 5S / 5 / 4S akwado formats. Nke a Ntụgharị ike-ezi nhọrọ maka gị. Ihe niile ị chọrọ ime dị nnọọ mfe atọ nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Tinye AVI faịlụ ka AVI ka iPhone Ntụgharị (Windows 8 na-akwado)
Ụzọ abụọ n'ihi na ị na tinye AVI faịlụ:
1. Pịa "Tinye Files" button ịgbakwunye AVI video faịlụ ka AVI video ka iPhone Ntụgharị.
2. Kpọmkwem ịdọrọ gị AVI faịlụ n'ime AVI video ka iPhone Ntụgharị.
Nke a Ntụgharị akwado ogbe akakabarede, otú i nwere ike mbubata na tọghata ọtụtụ multimedia faịlụ otu mgbe.
Nzọụkwụ 2. Họrọ mmepụta format
Ihe kacha ụzọ ka mmepụta format bụ pịa "Format" oyiyi bọtịnụ na n'akụkụ aka nri, ma na-achọta gị chọrọ otu ke "Apple" udi. Ị nwere ike pịa "Open nchekwa" ndọpụta ndepụta ezipụta a ndekọ na kọmputa gị ịzọpụta mmepụta faịlụ.
Nzọụkwụ 3. Malite akakabarede
Pịa "tọghata" na-amalite AVI / DivX ka iPhone video akakabarede. The converting ọganihu mmanya na-egosi gị otú ị ukwuu nke ngbanwe na dechara.
Ọ gwụla. Ị pụrụ ịnụ ụtọ na ịkọrọ gị AVI videos na gị iPhone 5S / 5 / 4S ugbu a. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na videos-ọzọ ịtụnanya, ị nwere ike ịtọ video mkpebi, aru ọnụego, codec na etiti ọnụego iji nweta zuru okè mmepụta videos, nakwa dị ka Dezie AVI video faịlụ site trimming, cropping na-agbakwụnye pụrụ iche mmetụta na watermarks , tupu ị mmepụta ya. Nke a AVI video ka iPhone Video Ntụgharị (Windows 8 na-akwado)-enye gị ohere ime ya!
Olee otú iji tọghata AVI ka Samsung Galaxy S5 / S4 / S3
Olee otú Idozi a Oyi kpọnwụrụ iPhone
Top 5 ngwa ọdịnala n'ihi Android ekwentị mkpanaaka na Chọta Lost iPhone
10 Ebe hazie Photo iPhone Ileba
Otú nyefee faịlụ site iPhone ka Android / iOS / Symbian